आकस्मिक मृत्यु किन हुन्छ ? - ज्ञानविज्ञान
राति सामान्य अवस्थामै सुतेको मान्छे बिहान मृत अवस्थामा भेटिन्छ । परिवारका सदस्य भन्छन्– न कुनै रोग थियो न औषधि सेवन नै तर पनि के कारण हुन्छ आकस्मिक मृत्यु ?
Topics #आकस्मिक #मृत्यु
Don't Miss it यसरी सेवन गरौं जाडोमा तुलसीलाई, रुँघा-ज्वरोमा लाभदायक
Up Next डिप्रेसनबाट बच्न च्याउ
स्वस्थ नै सबै भन्दा ठुलो धन हो, को चाहदैन स्वस्थ हुन ? स्वस्थ्य रहन अपनाउनुस् ९ टिप्स
१. भोजनमा विविधता स्वास्थ्यका लागी हाम्रो शरीरलाई ४० भन्दा बढी पोषक तत्व चाहिन्छ र कुनै एकल भोजनले ती सबै तत्व…